Iyo eSIM yeApple Watch yaisabvumidza kufona | Ndinobva mac
Iyo eSIM yeApple Watch yaisabvumidza kufona
Tave mazuva mashoma mairi Apple Watch ichisimuka semunhu anopokana nerunyerekupe uye makuhwa aya anotaura nezvekuiswa kweEIM kuti ikwanise kuita kuti chishandiso chiwedzere kuzvimiririra kubva ku iPhone. Mune ino kesi, imwe yeguhwa yakayambira kuti iyo nyowani Apple Watch Series 3 mamodheru aibvumidza yakazvimirira kufona kune iyo iPhone, ikozvino zvinoita sekunge izvi hazvingadaro.
Tinogona kupinda mugakava rakasimba nezve uchishandisa Apple Tarisa sefoni uye isu tine chokwadi chekuti vanopfuura mumwe wevaya varipo vanogona kuzviona zvakajairika, vamwe senzira yekufona chaiko uye vamwe vazhinji vanozozviona sechinhu chisiri chechisikigo kana pasina mukana wekushanda.
Chinhu chakanaka nezve eSIM ndechekuti inotora nzvimbo diki mumushini sezvo ichibatanidzwa, chimwe chinhu icho mamwe mamodheru ePadad atove nacho uye pamwe anosanganisira Apple Watch Series 3. Zvese zvichiri chikamu cheguhwa uye isu tichakurumidza kusiya kusava nechokwadi nezve kubatanidzwa kwayo kana kuti kwete mu smart wachi inogona kuunza munaGunyana.
Chii chichava wachi itsva yeiyo Cupertino firm ichave ine eSIM kadhi rakabatanidzwa uye inogona kubvumira kushandiswa kwedata, asi kwete kufona. Iyo iPhone yatovepo yekufona uye, zvichikundikana izvo, mukana wekupindura mamwe emafoni ari kuuya kubva kuwatch, chimwe chinhu chatinacho kare kubva kunguva yekutanga yeApple Watch. Ichokwadi kuti kufona kweVoIP kunogona kuitwa kubva kuApple Watch nekuda kwekubatana kweLTE, asi pachezvangu ndinofunga kuti vanoshanda havazove vebasa uye vanozogumira mukana uyu.
Pane dzimwe nguva uye semuridzi wechizvarwa chekutanga Apple Watch ndakatora runhare runouya uye chiitiko chinonakidza kunyanya kana tiri kushandisa mahedhifoni eBluetooth kana maAirPods, sezvo vhoriyamu iri yakanaka, asi chimwe chinhu chakaringana kana tiri munzira nemheremhere. Muchidimbu, isu tinofanirwa kufunga kuti zvese zvakagadziridzwa zvakaitwa muwachi nyowani zvinogamuchirwa uye kuti takatarisana nechinhu chitsva kuApple, uine yakawanda nzvimbo yekuvandudza pamusoro pemakore mashoma anotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo eSIM yeApple Watch yaisabvumidza kufona
Anokurumidza Musiki Chris Lattner ajoina Google maRanks
Apple Pay haigone kushandiswa pamapeji anokurudzira maNazi kana mafungiro echisarura